Lapho amanzi kakade sekuqala ukufudumala kanye eziyizimbangela eside phezu, carp iqala eyofuna ukudla ezindaweni evamile. Uyaqhubeka ukudla ukudla okuvela ezilwaneni, kodwa kancane kancane livela batshale ukudla ekudleni kwakhe. Nakuba lokhu akuyona yonke indawo futhi ngaso sonke isikhathi.
Indikimba ngayinye amanzi ugcwale carp, Anglers usetha izimfihlakalo zayo. Kwenye yalezi ukudoba carp kungenzeka kuphela ekuseni lingakaphumi ilanga. Karas kusuka kwenye kwesigubhu ukuluma kuphela emini kuphela uma kwenzeka ukuthi amamitha ayishumi zokudoba banomsindo, ukhuphuka uvela enhleseni phansi, ababhukudi gay. Umzimba yesithathu yamanzi emini ibukeka yokuqothulwa, kodwa kusihlwa twilight kilogram izinhlanzi giant stoked yamabhola antantayo futhi odidekile e igiya utshani.
Kufanele aqaphele ukuthi wesithunywa jikelele ngalesi izinhlanzi lapho. Ngakho-ke, ekubambeni crucian - umsebenzi esinzima futhi ezithakazelisayo. Too bathole okuningi kanye lezimanga ukwazi ukuhlangabezana Angler endleleni yakho. Imfundiso Kwehlukanisa izinhlobo ezimbili eziyinhloko of ukudoba carp: Ukudoba ngosizo Imbongolo kanye iflothi.
Catching carp ku lolo - isikole esihle imfundamakhwela Angler. Izinsika Kwakungenzima kakhulu kuye: induku, esondweni, line ukudoba, iflothi, Sinker, hook. Umehluko wemisindo nemiqondo yamagama uqale uma une ukuzivumelanisa nezimo ukudoba ethize.
Angler kufanele akhethe ubude induku ukusebenza kwawo ukuze abaphonse umlomo wombhobho endaweni yokudoba. Lapho eside ephonsa elula okuthiwa Bologna ngenela. ukusetshenziswa A asakazwe eduze kangcono induku fly ukudoba. Uma amanzi ke kusobala ekubambeni carp kwi induku iflothi kuhilela ukusetshenziswa aphambili kusukela fluorocarbon. Uma amanzi engekho liguqubele kungenzeka ukuphatha monofilament diameters zinkulu futhi ungasebenzisi ngezintambo. Ngisho ukukhetha iflothi, Sinker nehhuku osayizi zincike ezimeni ukudoba carp.
Catching carp phezu donk , futhi, akubonakali ekuqaleni shazi into elukhuni. Izinsika lula kuye kunokumane nje lapho ukudoba iflothi induku, kodwa kumele kahle olususwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu uma alamu bite.
Karas ehlobo - izinhlanzi ngokucophelela. Catching carp ngaphandle lolo kulesi sikhathi sonyaka - ukusebenza unpromising, nezimfuneko lolo eziphoqelelwe ahlaselwe kabi ubhadane lwesifo. isisekelo sayo kufanele imibengo imikhiqizo yemifino kusukela ukufakwa esiyisibopho ingxenye isilwane, baking powder kanye yokudla indawo. Ngaleso sikhathi, baba ingxenye ebalulekile flavorings lolo. Ikhomponethi oyisibopho ukudoba ehlobo - ikhanda (lolo).
Lure Angler ngokuvamile kakhulu ezidingekayo. On lolo kuqala njalo esifanelana ezincane futhi emincanyana ngaphezulu inhlanzi odla ke inhlawulo ngokushesha ngokwanele. Karas, ikakhulukazi ezinkulu, uyeza lolo ngesikhathi esisodwa, adle uthuli ezinkulu kuphela. Lokhu kusebenza kuzo zombili iflothi futhi donochnoy ekubambeni le nhlanzi zinhlobo (ngaphandle - Imbongolo nge kubhavu).
amathiphu Summer - omunye carp imfihlakalo, otgadku okuyinto anganikeza kuphela ichibi nabadobi ongumakad 'ebona, abazi zonke izimfihlo zakhe. Ngezinye izikhathi, ukuze ukubamba carp, Angler kufanele uvakashele ichibi ngaphandle nenduku yokudoba uhambe sigudla ugu, uzizwa 007. Sidinga kuyiwe asebemnkantsh 'ubomvu Slingshot kwesokunxele futhi ngokucophelela uhlole ogwini. On ogwini ngempela kungenzeka ukuthola izinsalela ukudla okuhlukahlukene noma izicupho. Lokhu kuzosiza Angler ukukhethwa umlomo wombhobho ukunquma.
Futhi-ke, kudingeka sicabangele umthelela sezulu. Karas, ukudlula noma iyiphi enye inhlanzi iyaphendula ukusicindezela izinguquko, izinguquko ezingeni futhi obala yamanzi nezinye izinto zemvelo. I ukudoba kungaqali trifles, futhi esimweni ukudoba carp ngokuvamile kungenziwa kalula yisikwele. Kunzima, kodwa lowo wayezimisele ukubamba carp, ndawo ashona.
Ukudoba ku Dnipropetrovsk esifundeni lapho okudoba amabala?
Leash ngoba Pike ezandleni flyurokarbona siqu: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye kudivayisi
Ukudoba Winter ngoba Pike ku zherlitsy. ukudoba Pike ebusika: ngenela kanye lolo ukudoba ebusika
Ukudoba Dubeshne: incazelo kanye nezithombe
Iyiphi indlela engcono kakhulu ukudoba ebusika induku bengena ezingosini zayo?
Diorama "Sevastopol '. Ummeli nobuqhawe Sevastopol. Diorama "Sevastopol ': kanjani ukuba uthole
Chinese Umdwebo igxathu negxathu
Sifaka imfucuza, siyishintshe ibe ukudla okunamnandi kwe-Xe
Izilinganiso ngokwenza umsebenzi kagesi. Izibonelo kulinganiswa umsebenzi kagesi
Avira: ukubuyekezwa, imibono, izincomo
ATI Mobility Radeon HD 5470: Izici
Kungcono wotshani mechanical: Izibuyekezo